भर्खरै धनुशा बाट आयो सुन्दै अचम्म लाग्ने खबर ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै धनुशा बाट आयो सुन्दै अचम्म लाग्ने खबर !
भर्खरै धनुशा बाट आयो सुन्दै अचम्म लाग्ने खबर !
धनुषा, १० वैशाख । रोकिराखेको बसमा एक्कासी आगो दनदनी बलेपछि वरपरका देख्ने मानिस दंग परे । हेर्दा हेर्दै बस जलेर नष्ट भयो । यो घटना भएको हो धनुषामा । धनुषामा सडकमा राखिरहेको बसमा एक्कासी आगलागी भएको हो । जनकपुरदेखि धनुषाधामसम्म चल्ने ना २ ख ८२४ नम्बरको बसमा अचानक आगलागी हुँदा बस जलेर नष्ट भएको हो ।धनुषाधामको सडक छेउमा रहेको आरक्षित वनमा
रोकेर राखेको बसमा बेलुका साढे ४ बजे एक्कासी आगो दनदनी बलेपछि स्थानीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । नजिकै रहेको धनुषाधाम नगरपालिकाको बारुण यन्त्र र स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा आगो त नियन्त्रणमा आयो । तर त्यतीन्जmबस भने जलेर नष्ट भइसकेको थियो । आगो कसरी लागेको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधामले जनाएको छ ।
भर्खरै तेह्रथुम बाट आयो यस्तो खबर , गाई काट्दा परे प्रहरीको फन्दामा !!